Uncategorized – ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းများနှင့်သုတ/ရသ/ဟာသ အစုံအလင်း
အောင်လကို ရှူံးနိမ့်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဘရာဇီးကစားသမား မာချာဒို
အောင်လကို ရှူံးနိမ့်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဘရာဇီးကစားသမား မာချာဒို *************************** မနေ့ညက one championship အောင်လရဲ့ညာခြေကန်ချက်နဲ့ဘရာဇီးလဲကျပြီး အောင်လနိုင်ခဲ့တယ်။ ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲကျင်းပရာ ဘရာဇီးကစားသမား မာချာဒိုက သတင်းထေါက်တစ်ဦးအမေးကိုယခုလိုဖြေကြား ခဲ့ပါတယ်။ ” ကျတော်မြန်မာနိုင်ငံအနေအထါး ရာသီဥတု နေသားကျဖို့ ရန်ကုန်မြို့ကို ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလ ကစပြီး ၃/၄ လကြိုရောက်နေခဲ့တာပါ။ ကျတော်…
မိဘစော်ကား ဒဏ်(၁၀)ပါး ___________________ မိမိ မှန်သည်ဖြစ်စေ ၊ မှားသည်ဖြစ်စေမိဘတွေများအား ဒေါသတကြီး၊ အော်ကြီး၊ဟစ်ကျယ်ပြန်လှန်ပြောဆိုခဲ့မိလျှင် လက်ရှိ ပစ္စုန်ပ္ပန်ဘ၀တွင်ဖေါ်ပြပါဒဏ်ဆယ်ပါးထဲက အနည်းဆုံး တစ်ပါး ပါးသင့် တတ်ပါသည်။ . အဆိုပါဒဏ်ဆယ်ပါးမှာ . ၁။ ကြမ်းကြုတ်သော ဝေဒနာ ခံစားရခြင်း ၂။ ကိုယ်ခန္ဓာ ပျက်စီးခြင်း ၃။ အနာရောဂါဖြစ်ခြင်း ၄။ ရူးသွပ်ခြင်း ၅။…
အမှိုက်လာသွန်တာ မခံပါနဲ့ သိပ်ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ အချိန် တစ်မိနစ်ပဲပေးပါ။ စိတ်ထဲ အမှိုက်လာသွန်မခံကြရပါစေနဲ့။
အမှိုက်လာသွန်တာ မခံပါနဲ့ သိပ်ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ အချိန် တစ်မိနစ်ပဲပေးပါ။ စိတ်ထဲ အမှိုက်လာသွန်မခံကြရပါစေနဲ့။ တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ အထုပ်ကြီးတခုကို ပုခုံးမှာထမ်းပြီး အိမ်ထဲဝင်လာတယ်။.ပြီးတော့ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ အထုပ်ကြီးထဲက ပစ္စည်းတွေကို ညေ့်ခန်ကကြမ်းပြင်ပေါ်ကို သွန်ချလိုက်တယ်။ ထွက်ကျလာတာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့ အမှိုက်သရိုက်တွေပါ။ ဒီတော့ သင်ဘာလုပ်မလဲ။ "ဟေ့ လူ ဒါဘာလုပ်တာလဲ။ အဲဒီအမှိုက်တွေကို ချက်ခြင်းပြန်ကောက်လိုက်။ မကောက်ဘူးဆိုရင်တော့…
နေအိမ်တံခါးဖျက်ဆီးပြီး ပစ္စည်းခိုးရန်ကြံသူကို ကြိုးတုပ်ရိုက်ရာမှ သေဆုံးမှုဖြစ်
နေအိမ်တံခါးဖျက်ဆီးပြီး ပစ္စည်းခိုးရန်ကြံသူကို ကြိုးတုပ်ရိုက်ရာမှ သေဆုံးမှုဖြစ် ======================= ======================= တောင်ကြီးမြို့ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက် ရှိ တထာဂတသာဝက တောရကမ္မဌာန်းကျောင်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်ရင်း ကျောင်းအနောက်ဘက်ကပ်လျက်ရှိနေအိမ်မှ တံခါးအား ဖျက်ဆီးကာ ပစ္စည်းများခိုးယူရန်ကြံစည်သူ ဇော်ထွန်းဦး(အသက်၃၅နှစ်) အား တောရကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနှင့်ကပ္ပိယတို့က ကြိုးဖြင့်တုပ်ပြီး သစ်ကိုင်း၊ကြေးစည်တုတ်တို့ဖြင့် ရိုက်နှက်ရာမှ သေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ၂၁ရက် မနက်၉နာရီအချိန်က ဇော်ထွန်းဦး(ကံသာရပ်ကွက်နေသူ)သည် အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ အလည်ရောက်ရှိနေရာမှ ဒေါ်စန္ဒာဌေး…